IMDb မှာ Rating (7.5) အထိ ရရှိထားတဲ့ Action, Adventure, Fantasy အမျိုးအစား ဇာတ်ကားဟောင်းတစ်ကားဖြစ်တဲ့ Wonder Woman (2017) ကို မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ ဖိုင်ဆိုဒ်အကြီးအသေးခွဲပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် Large Size2GB Quality ..720p BluRay Small Size 477 MB Quality ..480p Movie & Photo Credit to Orginal Uploader Subtitle ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
IMDb မှာ Rating (5.4) ရရှိထားတဲ့ Action, Adventure, Sci-Fi အမျိုးအစား The Predator (2018) ကို မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ ဖိုင်ဆိုဒ်အကြီးအသေးခွဲပြီး တင်ပေးထားပါတယ် Movie Quality က 1080p HD ပါ File Size ..2 GB ပါ ဖိုင်ဆိုဒ်အသေးက 480p ဖြစ်ပြီး ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 492 MB ပါ မကြည့်ရသေးတဲ့ သူတွေအတွက်ပါ .. Movie & Photo Credit to Orginal Uploader Subtitle ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း
IMDb မှာ Rating (5.7) ရရှိထားတဲ့ Action, Crime, Thriller အမျိုးအစား Security (2017) ကို မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် Movie Quality က 480p ပဲရှိပါတယ် ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ (956) MB ပါ Movie & Photo Credit to Orginal Uploader ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း
IMDb မှာ Rating (6.7) ရရှိထားတဲ့ Action, Adventure, Fantasy အမျိုးအစား Underworld Series ထဲက ဒုတိယမြောက် ဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့ Underworld : Evolution (2006) ကို မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ ဖိုင်ဆိုဒ်အကြီးအသေးခွဲပြီး တင်ပေးထားတယ် ပြန်လည်ကြည့်ချင်တဲ့ သူတွေအတွက်ပါ Movie Quality က 720p HD ပါ Photo & Movie Credit to Orginal Uploader ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း
IMDb မှာ Rating (7.0) ရရှိထားတဲ့ Action, Fantasy, Thriller အမျိုးအစား Underworld Series ထဲက ပထမဆုံး ဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့ Underworld (2003) ကို မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ ဖိုင်ဆိုဒ်အကြီးအသေးခွဲပြီး တင်ပေးထားတယ် ပြန်လည်ကြည့်ချင်တဲ့ သူတွေအတွက်ပါ Movie Quality က 720p HD ပါ Photo & Movie Credit to Orginal Uploader ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း
IMDb မှာ Rating (6.3) ရရှိထားတဲ့ Action, Crime, Thriller အမျိုးအစား John Wick: Chapter2(2017) ကို မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ ဖိုင်ဆိုဒ်အကြီးအသေးခွဲပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ် Large Size..2.3 GB...Quality 1080p HD Small Size..534 MB...Quality 480p အောက်မှာ ဒေါင်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် John Wick (2014) ကိုလည်း 1080p Quality တင်ပေးပြီးပါပြီ Photo & Movie Credit to Orginal Uploader Myanmar Sub : ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
IMDb မှာ Rating (6.3) ရရှိထားတဲ့ Action, Crime, Drama အမျိုးအစား The Commuter (2018) ကို မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် Movie Quality ကတော့ (480p) ပါ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ (996 MB) ရှိပါတယ် အောက်မှာ ဒေါင်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် Photo & Movie Credit to Orginal Uploader ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း
IMDb မှာ Rating (6.1) ရရှိထားတဲ့ Thriller အမျိုးအစား Beacon Point (2016) ကို မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် Movie Quality ကတော့ (480p) ပါ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ (773 MB) ရှိပါတယ် အောက်မှာ ဒေါင်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် Photo & Movie Credit to Orginal Uploader ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း
John Wick က ကျွမ်းကျင်တဲ့ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ရေး သမားဟောင်း တစ်ယောက်ပါ သူ့ ဇနီး သေဆုံးသွားတာ မကြာသေးခင်အချိန်မှာပဲ ရုရှားက Viggo Tarasov ရဲ့ သားဖြစ်သူ Iosef Tarasov နဲ့အဖွဲ့က သူ့ဇနီးရဲ့ နောက်ဆုံးလက်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ ခွေးလေးကို သတ်ဖြတ်ပြီး ကားကို ခိုးယူသွားခဲ့ပါတယ် ..John အကြောင်းကို သိနေတဲ့ Viggo က သူ့ရဲ့သား အသက်ကို ကယ်နိုင်ဖို့ အစွမ်းကြိုးစားခဲ့ပါတယ် IMDb မှာ Rating (7.3) ရရှိထားတဲ့ Action, Crime, Thriller အမျိုးအစား John Wick (2014) ကို မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် Movie Quality 1080p HD (Larg Size) Small Size 480p ပါ Photo & Movie Credit to Orginal Uploader Subtitle : Aye Chan ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း
တစ်ချိန်တုန်းက ပုရွက်ဆိတ်အနီတွေနဲ့ အနက်ကောင်တွေ တိုက်ပွဲအတွင်းမှာ ပိုးကောင် လေးတစ်ကောင်ရဲ့ စွန့်စားခန်းအကြောင်း ပါ IMDb မှာ Rating (7.1) ရရှိထားတဲ့ Animation, Adventure, Family အမျိုးအစား Minuscule: Valley of the Lost Ants (2013) ကို Animation ကြိုက်သူများအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ် File Size ..1.7 GB ..Quality 1080p BluRay File Size ..400 MB..Quality 480p ပါ အောက်မှာ ဒေါင်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် Photo & Movie Credit to Orginal Uploader ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း
ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ခေတ်သစ်တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ လူ့အသက်ပေါင်းများစွာကို သတ်ပစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ နောက်ထပ် ဘယ်လိုအကြောင်းမျိုးနဲ့မှ လူမသတ်တော့ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ ပါးမှာ ကြက်ခြေခတ် အမာရွက်နဲ့ ဆာမူရိုင်း ဓားသမားတစ်ယောက်အကြောင်းနဲ့ .......... 2012 ခုနှစ် August (25) ရက်နေ့မှာ ထွက်ရှိပြီး IMDb မှာ Rating (7.6) ရရှိထားတဲ့ Action, Drama, History အမျိုးအစား Rurouni Kenshin : Origins (2012) ကို မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် File Size ..1.7 GB Quality ..720p BluRay File Size .. 667 MB Quality ..480p Photo & Movie Credit to Orginal Uploader Subtitle : Aye Chan ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း
IMDb မှာ Rating (7.0) ထိရရှိထားတဲ့ Action, Crime, Drama အမျိုးအစား KOREA Movie ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်တဲ့ Inside Man (2015) ကို မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ ဖိုင်ဆိုဒ်ခွဲပြီးတင်ပေးထားပါတယ် 720p HD အမျိုးအစားမဟုတ်ပါ ဖိုင်ဆိုဒ်အကြီးက 1 GB Quality က 480p ပါ ဖိုင်ဆိုဒ်အသေးက 570 MB Quality က 360p ပါ Photo & Movie Credit to Orginal Uploader ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း
IMDb မှာ Rating (7.2) ထိရရှိထားပြီး 2017 March လ ထဲမှာထွက်ရှိထားတဲ့ Beauty and the Beast (2017) ကို မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ ဖိုင်ဆိုဒ် အကြီးအသေးခွဲပြီးတင်ထားပါတယ် ဖိုင်ဆိုဒ်အကြီး 1.2 GB Quality 720p BluRay ဖိုင်ဆိုဒ်အသေး 659 MB Quality 480p Photo & Movie Credit to Orginal Uploader Subtitle : ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
2018 October လ မှာထွက်ထားတဲ့ Action, Sci-Fi အမျိုးအစား Venom (2018) ကို မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ တင်ပေး လိုက်ပါတယ် ဖိုင်ဆိုဒ်အကြီးအသေး ခွဲပြီးတင်ပေးထားပါတယ် Movie Quality ကတော့ 720p BluRay ပါ ဖိုင်ဆိုဒ်အကြီး 1.2 GB Quality 720p BluRay ဖိုင်ဆိုဒ်အသေး 538 MB Quality 480p Photo & Movie Credit to Orginal Uploader Subtitle : ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
IMDb မှာ Rating (7.4) အထိရရှိထားတဲ့ Horror, Mystery, Thriller အမျိုးအစား The Conjuring2(2016) ကို မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် The Nun (2018) ကို ကြည့် ပြီးသား သူတွေကတော့ ဒီဇာတ်လမ်းကို သိကြမှာပါ ဖိုင်ဆိုဒ်အကြီး 1 GB Quality ..720p HD ပါ ဖိုင်ဆိုဒ်အသေး 516 MB Quality ..480p Photo & Movie Credit to Orginal Uploader Subtitle : ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Dr.Frankenstein ဆိုတဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်က လူသေအလောင်း (8) ခုကနေ တစ်ပိုင်းတစ်စစီ ဆက်စပ်ပြီး အသက်သွင်းယူထားတဲ့ လူတစ်ယောက်အကြောင်းနဲ့ လူသားမျိုးနွယ်တွေကို စောင့်ရှောက်တဲ့ Gargoyles နဲ့ နတ်ဆိုးတွေရဲ့ စစ်ပွဲ အကြောင်း ရိုက်ကူးထားတဲ့ Action.. Fantasy.. Horror အမျိုးအစား I.Frankenstein (2014) ကို မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ ဖိုင်ဆိုဒ်အကြီးအသေးခွဲပြီးတင်ပေးထားပါတယ် ဖိုင်ဆိုဒ်အကြီး 1 GB..Quality 720p BluRay ဖိုင်ဆိုဒ်အသေး 473 MB..Quality 360p Photo & Movie Credit to Orginal Uploader Subtitle : ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Drama, Music, Romance အမျိုးအစား.. IMDb မှာ..Rating (7.4) ထိရရှိထားတဲ အရမ်းကောင်းတဲ့ Japan Movie ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပါ Kamakura တောင်ကုန်းလေးပေါ်မှာရှိတဲ့ အိမ်လေးကနေ Kaoru ဆိုတဲ့ အသက် (၁၆) နှစ်အရွယ်ကောင်မလေးဟာ မနက်အာရုံမတက်ခင် အချိန်တိုင်း သူမရဲ့ အိပ်ခန်းပြတင်းပေါက်လေးကနေ မြင်နေရတဲ့ ဘက်(စ်) ကားမှတ်တိုင်လေးမှာ Koji ဆိုတဲ့ ကောင်လေးနဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် ရေလွှာလျှောမစီးခင် နေ့တိုင်း တွေ့ကြတာ အမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ် Xeroderma Pigmentosum (XP) ဆိုတဲ့ ရောဂါကို ခံစားနေရတဲ့ Kaoru ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးဟာ နေရောင် ခြည်ထိတာနဲ့ သူမ ကို သေဆုံးတဲ့အထိဖြစ်စေနိုင်တယ် အဲ့ဒါကြောင့် ညဘက်ရောက်မှ မီးရထားဘူတာရုံကို လမ်းလျှောက်ပြီး ဂစ်တာတီး သီချင်းတွေ ဆို သီချင်းတွေရေးတက်တယ် တစ်မနက် သူမ သီချင်းဆိုပြီး အပြန် ကားမှတ်တိုင်လေးမှာ သူမ သဘောကျနေတဲ့ ကောင်လေး Koji နဲ့ တွေ့ခဲ့ရတယ် Koji က နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်ရောက်ရင် သူမ ရဲ့ သီချင်းဆိုတာကို လိုက်ပြီးအားပေးမယ်လို့ ကတိပေးခဲ့တယ် နောက်တော့ ............... လူငယ်နှစ်ယောက်ရဲ့ ဖြူစင်တဲ့ ချစ်ခြင်းတရား နဲ့ ဖခင်တစ်ယောက်ရဲ့ ကြေကွဲနာကျင်မှုတွေ အကြောင်းဖော်ညွှန်းထားတဲ့ ဒီဇာတ်ကားလေးကို မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ ဖိုင်ဆိုင်အကြီးအသေးခွဲပြီးတင်ပေးထားပါတယ် ကြည့်ပြီးသား သူတွေကတော့ ကျော်သွားလိုက်ပါနော်.. ဖိုင်ဆိုဒ်အကြီး 1.1 GB Quality 720p ဖိုင်ဆိုဒ်အသေး 601 MB Quality 360p Photo & Movie Credit to Orginal Uploader Subtitle : ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
IMDb မှာ Rating (7.9) ရရှိထား တဲ့ မင်းသားချော Tom Cruise ရဲ့ Mission: Impossible - Fallout (2018) ကို မြန်မာစာတန်ထိုးနဲ့ ဖိုင်ဆိုဒ်အကြီးအသေးခွဲပြီးတင်ပေးထားပါတယ် ဒီဇာတ်ကားမှာတော့ Man of Steel / Justice League ဇာတ်ကားတို့မှာ Superman အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ မင်းသား Henry Cavill လည်း ပါဝင်ထားတဲ့ Action, Adventure, Thriller အမျိုးအစား ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပါ မကြည့်ရသေးတဲ့ သူတွေအတွက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ဖိုင်ဆိုဒ်အကြီးက 1.4 GB ..Quality 720p HD ဖိုင်ဆိုဒ်အသေး 641 MB ..Quality 360p Photo & Movie Credit to Orginal Uploader Subtitle : ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဒီဇာတ်ကားကတော့ အရင်တုန်းကတင်ပေးဖူးတဲ့ ဇာတ်ကားအဟောင်းပါပဲ ဖိုင်ဆိုဒ်အသေး နဲ့ Quality 360p ပဲရှိပါတယ် 720p HD နဲ့ ကြည့်ချင်သူများအတွက်ကို လည်း နောက်ရက် တင်ပေးပါ့မယ် အခုတော့ ဖိုင်ဆိုဒ်အသေးကို မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ တင်ပေးထားပါတယ် Photo & Movie Credit to Orginal Uploader Subtitle : ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မေလ(၁၂) ရက်နေ့က Vista Pacific Flight 7500 အမည်ရှိတဲ့ ခရီးသည်တင်လေယာဉ်တစ်စီးဟာ Los Angeles International Airport ကနေ ဂျပန်နိုင်ငံ Tokyo ကို ထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ် (၁၀)နာရီလောက်ဖြတ်ကျော်ပျံသန်းရမယ့် ပစိဖိတ် သမုဒ္ဒရာ ပေါ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာ ခရီးသည်တွေဟာ ထူးဆန်းပြီးသဘာဝလွန် တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကို တွေ့ကြုံခဲ့တဲ့အကြောင်းရိုက်ကူးထားတဲ့ Horror.. Mystery..Sci-Fi အမျိုးအစား ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားကို မြန်ာစာတန်းထိုးနဲ့တင်ပေးလိုက်ပါတယ် အရင်တုန်းက တင်ပေးဖူးတဲ့ ဇာတ်ကားအဟောင်းမို့ ကြည့်ပြီးသား သူတွေကတော့ ကျော်သွားလိုက်ပါ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ Small Size ပါ Quality က 360p Photo & Movie Credit to Orginal Uploader Subtitle : Lotus Black ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်းမှ ပြန်လည်မျှဝေ ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
သမိုင်း မတိုင်ခင် အချိန်တုန်းက လူမျိုးစုတွေနဲ့အတူ ကျွဲတွေကို အမဲလိုက်ရင်း သေဆုံးပြီဆိုပြီးပစ်ထားခံခဲ့ရတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့သူ့လိုပဲ မိသားစုဆုံးရှုံးပြီးအုပ်စုနဲ့ ကွဲနေတဲ့ ဝံပုလွေတစ်ကောင်ကို အဖေါ်အဖြစ်နှစ်ဦးအတူ ကြမ်းတမ်းခက်ခဲလှတဲ့ အိမ်အပြန်ခရီးအကြောင်း နဲ့ ပထမဆုံး ........လူသားတွေနဲ့ ဝံပုလွေ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအဖော်ဖြစ်လာစေတဲ့ အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုအကြောင်း ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပါ ဖိုင်ဆိုဒ်အကြီးအသေးခွဲပြီးတင်ပေးထားပါတယ် ဖိုင်ဆိုဒ်အကြီး 993 MB Quality 720p ဖိုင်ဆိုဒ် အသေး 421 MB Quality 480p Photo & Movie Credit to Orginal Uploader Subtitle : ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Manji ဆိုတဲ့ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဆာမူရိုင်းဓားသမားတစ်ယောက်က တိုက်ပွဲတစ်ခုအပြီးမှာ ကျိန်စာသင့်သလို ဘယ်တော့မှမသေနိုင်တဲ့ ဘဝကို ရရှိခဲ့တယ် သူ့ ညီမ ရက်ရက်စက်စက် အသတ်ခံရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ ဆိုးဆိုးရွားရွားတိုက်ခိုက်တာကပဲ သူ့ဝိဥာဉ်ကို ပြန်ရနိုင်တဲ့ တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဆိုတာ သိခဲ့တယ် နောက်တော့ Rin ဆိုတဲ့ မိန်းခလေးကို သူ့မိဘတွေနဲ့ ဓားသမားတွေကို ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်သွားတဲ့ Anotsu ဆိုတဲ့သူကို ဂလဲ့စားပြန်ချေတာကို ကူညီဖို့ ကတိပေးခဲ့တယ် အဲ့ဒါက Manji ဘဝမှာ ဘယ်တုန်းကမှ စိတ်ကူးမကြည့်ဘူးတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲလာခဲ့တယ် !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Blade Of The Immortal (2017) ကို မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် မကြည့်ရသေးတဲ့ သူတွေအတွက်တော့ အောက်မှာ ဒေါင်းယူကြည့်ရှု့နိုင်ပါတယ် ဖိုင်ဆိုဒ်အကြီး 1.2 GB Quality 720p BluRay ဖိုင်ဆိုဒ်အသေး 611 MB Quality 480p Photo & Movie Credit to Orginal Uploader Subtitle : ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
IMDb မှာ Rating 5.5 ရထားတဲ့ Horror, Mystery, Thriller အမျိုးအစား The Nun (2018) ကို မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ ဖိုင်ဆိုဒ်အကြီးအသေးခွဲပြီးတင်ပေးထားပါတယ် မကြည့်ရသေးတဲ့ သူတွေအတွက်ပါ အောက်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ် Movie Quality က 720p HD ပါ Photo & Movie Credit to Orginal Uploader Subtitle : ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အကြမ်းဖက်သမားတွေ ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးသွားတဲ့ သူ့ရဲ့ တစ်ဦးသော သမီးလေးအတွက် တရားမျှတမှု လိုချင်တဲ့ ဖခင်နေရာက သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Jackie Chan ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပါ မကြည့်ရသေးတဲ့ သူတွေနဲ့ ပြန်ကြည့်ချင်တဲ့ သူတွေအတွက်ပါ Large Size 969 MB Quality 720p BluRay Small Size 461 MB Quality 360p Photo & Movie Orginal Uploader Subtitle : ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
လွန်ခဲ့တဲ့ ငါးနှစ်ခန့်က ပင်လယ်ရေငုပ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် Captain Jonas Taylor နဲ့ သူ့အဖွဲ့သားတွေ ကယ်ဆယ်ရေး ရေအောက်မစ်ရှင်တစ်ခုမှာ မမျှော်လင့်ပဲ အမျိုးမသိတဲ့ အရာတစ်ခုတိုက်ခိုက်ခံရပြီး မဖြစ်မနေ သူ့အဖွဲ့သား နှစ်ယောက်ကို ထားခဲ့ရပြီး မစ်ရှင်ကို အဆုံးသတ်လိုက်ရတယ် အဲ့ဒီကြေကွဲစရာအဖြစ်ဆိုးနဲ့ ကြုံခဲ့တဲ့ Jonas Taylor ကို သူ့ဇနီးဟောင်းအပါအဝင် လူတော်တော်များက ရေအောက်မှာတစ်စုံတစ်ခုတိုက်ခိုက်ခံရတာကို မယုံကြည်ခဲ့ကြဘူး Jonas က သူ့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ကို စွန့်ပစ်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံ ကမ်းခြေတစ်ခုမှာ ဘဝကို ကြုံသလိုဖြတ်သန်းနေခဲ့တယ် ဒါပေမယ့် တစ်နေ့မှာ သူမိတ်ဆွေဟောင်းတစ်ယောက်က သူ့ရဲ့ဇနီးဟောင်းအပါအဝင် အဖွဲ့သားတွေ သမိုင်းမတိုင်ခင်ခေတ်ကတည်းက မျိုးတုံးသွားပြီလို့ယူဆထားခဲ့တဲ့ ကြီးမားတဲ့ Megalodon, meaning "big tooth" အမျိုးအစား ငါးမန်းကြီး တိုက်ခိုက်ခံရပြီး ပင်လယ်ကြမ်းပြင်အောက်မှာ ပိတ်မိနေတာကြောင့် သူစွန့်ပစ်ထားတဲ့ ရေငုပ်ပြီး လူတွေကယ်တဲ့ အလုပ်ကို ပြန်လုပ်ဖို့အကြောင်းဖန်လာပါတယ် မင်းသား Jason Statham နဲ့ တရုပ်မင်းသမီး Bingbing Li တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ The Meg (2018) ကို မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ ဖိုင်ဆိုဒ်အကြီးအသေးခွဲပြီးတင်ပေးထားပါတယ် ကြည့်ပြီးသား သူတွေကတော့ ကျော်သွားလိုက်ပါနော် ဖိုင်ဆိုဒ် အကြီး2GB Quality 720p BluRay ဖိုင်ဆိုဒ်အသေး 616 MB Quality 480p Photo & Movie Orginal Uploader Subtitle : ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
သူ့(မ) ကို အိမ်မှာထားခဲ့ပြီး ထွက်သွားတဲ့ ဖခင်ကို တစ်ကြိမ်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် ပြန်တွေ့ဖို့ရှာဖွေနေတဲ့ မျက်မမြင်မိန်းခလေးရယ် သူ့ရဲ့ဓားကြောင့် အမေဖြစ်သူရဲ့ မွေးရာပါ မျက်လုံးတွေကို ကွယ်စေခဲ့တဲ့အတွက် ဓားကို ဆွဲထုတ်ရမှာကို တွန့်ဆုတ်နေတဲ့ ဆာမူရိုင်းတစ်ယောက် ရယ် သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ အကြောင်းကို ပုံဖော်ထားတဲ့ (2008) ခုနှစ်တုန်းက ထွက်ထားတဲ့ ဂျပန် ဇာတ်ကား လေးပါ မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ ဖိုင်ဆိုဒ်အကြီးအသေးခွဲပြီးတင်ပေးထားပါတယ် ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ် ဖိုင်ဆိုဒ်အကြီး 1 GB Quality 720p ဖိုင်ဆိုဒ်အသေး 618 MB Quality 480p Photo & Movie Orginal Uploader Subtitle : ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မီးတောင်ပေါက်ကွဲပြီး ဒိုင်နိုင်ဆောတွေ မျိုးတုန်းမယ့်အရေးကနေ ကာကွယ်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့ Action, Adventure, Sci-Fi အမျိုးအစား Jurassic World: Fallen Kingdom (2018) ကို မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ ဖိုင်ဆိုဒ်အကြီးအသေးခွဲပြီးတင်ပေးထားပါတယ် ဖိုင်ဆိုဒ်အကြီး 1 GB Quality 720p ဖိုင်ဆိုဒ်အသေး 405 MB Quality 480p Photo & Movie Orginal Uploader Subtitle : ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
IMDb မှာ Rating (7.8) ရထားတဲ့ Adventure, Fantasy အမျိုးအစား The Hobbit စီးရီး ရဲ့ နောက်ဆုံးဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့ The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014) ကို မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ ဖိုင်ဆိုဒ် အကြီးအသေးခွဲပြီးတင်ပေးထားပါတယ် ဖိုင်ဆိုဒ်အကြီး2GB Quality 720p ဖိုင်ဆိုဒ်အသေး 873 MB Quality 480p Photo & Movie Orginal Uploader Subtitle : ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
The Hobbit သုံးကားရှိတဲ့အထဲက ဒုတိယမြောက် ဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့ The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013) ကို မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ တင်ပေးထားပါတယ် ကြည့်ပြီးသားသူတွေကတော့ ကျော်သွားလိုက်ပါနော် မကြည့်ရသေးတဲ့ သူတွေနဲ့ ပြန်ကြည့်ချင်တဲ့ သူတွေအတွက်ပါ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ ဖိုင်ဆိုဒ်အကြီး2GB Quality 720p ဖိုင်ဆိုဒ်အသေး 800 MB Quality 480p Photo & Movie Orginal Uploader Subtitle : ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း
IMDb မှာ Rating (6.4) ရရှိထားတဲ့ Action , Adventure , Fantasy အမျိုးအစား Tomb Raider (2018) ကို မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ တင်ပေးထားပါတယ် ဖိုင်ဆိုဒ်အကြီး 1 GB Quality .720p ဖိုင်ဆိုဒ်အသေး 565 MB Quality 480p Photo & Movie Orginal Uploader Subtitle : ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း
IMDb မှာ Rating 7.8 ရထားတဲ့ The Hobbit : An Unexpected Journey (2012) ကို မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့တင်ပေးထားပါတယ် The Hobbit သုံးကားရှိတဲ့အထဲက ပထမဆုံးဇာတ်ကားပါ (2012) ခုနှစ်နှစ်က ထွက်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားအဟောင်းကို ပြန်တင်ပေးထားပါ ကြည့်ပြီးသားသူတွေကတော့ ကျော်သွားလိုက်ပါနော် မကြည့်ရသေးတဲ့ သူတွေနဲ့ ပြန်ကြည့်ချင်တဲ့ သူတွေအတွက်ပါ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ ဖိုင်ဆိုဒ်အကြီး2GB Quality 720p ဖိုင်ဆိုဒ်အသေး 880 MB Quality 480p Photo & Movie Orginal Uploader Subtitle : ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း
The Lord of Rings (2003)
Action .. Adventure .. Drama အမျိုးအစား The Lord of the Rings ရဲ့ နောက်ဆုံးဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့ The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) ကို မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ တင်ပေးထားပါတယ် ဖိုင်ဆိုဒ် ခွဲပြီးတင်ပေးထားပါတယ် ဇာတ်ကားကလည်း (4) နာရီ ကျော်ကျော်လောက်ရှည်တာမို့ ဖိုင်ဆိုဒ်လည်းများပါတယ် ဖိုင်ဆိုဒ် အကြီး 3.44 GB Quality ..720p ဖိုင်ဆိုဒ် အသေး 998 MB Quality .. 360p Photo & Movie Orginal Uploader Subtitle : K.M.A ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း
The Lord of Rings (2002)
IMDb မှာ Rating (8.7) ထိရရှိထားတဲ့ The Lord of the Rings ဒုတိယမြောက် ဇာတ်ကား The Two Towers (2002) ကို မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ဖိုင်ဆိုဒ်အကြီးအသေးခွဲပြီးတင်ပေးထားပါတယ် ဖိုင်ဆိုဒ် အကြီး2GB Quality ... 720p ဖိုင်ဆိုဒ်အသေး 916 MB Quality ...360p Photo & Movie Orginal Uploader Subtitle : K.M.A ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း
The Lord of Rings (2001)
ဒီကားမှာတော့ အမှောင်သခင်ကြီး Sauron ရဲ့ ဝိဥာဉ်က တစ်ဖန်ပြန် လည်နိုးထလာပြီး၊ သူရဲ့ လက်စွပ်ကို ပြန်ရှာနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာပဲ Bilbo Baggins ကလည်း တစ်ချိန်တုန်းက သူအသုံးပြုခဲ့တဲ့ ကိုယ်ပျောက်လက်စွပ်ကို သူရဲ့ တူဖြစ်တဲ့ Frodo ကို အမွေပေးခဲ့ပါတယ် ဒါကို Gandalf က သတိထားမိသွားပါတယ် ဒီလက်စွပ်ဟာ Orc တွေရဲ့ခေါင်းဆောင် Sauron ရဲ့ လက်စွပ်ဖြစ်မှန်းသိသွားခဲ့ပြီး Sauron က သူ့ရဲ့ တပည့်တွေကို စေလွှတ်ပြီး လိုက်ရှာနေတာကြောင့် Frodo ကို သူတို့ရဲ့မြို့ကနေ အမြန်ဆုံးထွက်ခွာခိုင်းရာက ဇာတ်လမ်းအစပြုခဲ့တာပါ ခဏခဏ တောင်းနေလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ပုံမှန် ဇာတ်ကားတွေထက် နှစ်ဆလောက်ရှည်တာမို့ ဖိုင်ဆိုဒ်လည်းများပါတယ် ဖိုင်ဆိုဒ်အသေးတောင်မှ (700) MB ကျော်ပါတယ် ဖိုင်ဆိုဒ်အကြီး2GB Quality HD 720p ဖိုင်ဆိုဒ်အသေး 784 MB Quality 480p Photo & Movie Orginal Uploader Subtitle : K.M.A ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း
ဒီဇာတ်ကားကတော့ မသိတဲ့သူမရှိသလောက် နာမည်ကြီးတဲ့ကားတစ်ကားပါ ဟန်မင်းဆက် အေဒီ ၂၀၈ မှာ အမတ်ကြီး ချောင်ချောက်ဟာ ဘုရင်ကိုခြိမ်းခြောက်ကာ အာဏာသုံးပြီး စစ်သည်ဗိုလ်ပါများနဲ့တကွ ဘုရင့်မျိုးနွယ်များဖြစ်တဲ့ ကျုံရီ လျှိုပေ့ နဲ့ စစ်သေနာပတိ ဆွန်ချန်တို့ကိုတိုက်ဖို့အတွက် ကြည်း-ရေ ၂ တပ်ပေါင်း ၈ သိန်း နဲ့အတူ တောင်ဘက်ကိုစစ်ချီတက်လာခဲ့ကြပါတယ် အင်အားကြီးတဲ့ စစ်သည် ၈ သိန်းနဲ့ ကျုံရီ လျှိုပေ့ တို့ ဘက်မှာ စစ်သည် ၁ သိန်းနီးပါးလောက်နဲ့ ဘယ်လိုမျိုးတိုက်ခိုက်ကြလဲဆိုတာ မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ အောက်မှာ ဒေါင်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် ဖိုင်ဆိုဒ်အကြီး2GB Quality ... 720p ဖိုင်ဆိုဒ်အသေး 998 MB Quality ...360p Photo & Movie Orginal Uploader Subtitle : K.M.A ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း
ဒီဇာတ်ကားကတော့ မသိတဲ့သူမရှိသလောက် နာမည်ကြီးတဲ့ကားတစ်ကားပါ ဟန်မင်းဆက် အေဒီ ၂၀၈ မှာ အမတ်ကြီး ချောင်ချောက်ဟာ ဘုရင်ကိုခြိမ်းခြောက်ကာ အာဏာသုံးပြီး စစ်သည်ဗိုလ်ပါများနဲ့တကွ ဘုရင့်မျိုးနွယ်များဖြစ်တဲ့ ကျုံရီ လျှိုပေ့ နဲ့ စစ်သေနာပတိ ဆွန်ချန်တို့ကိုတိုက်ဖို့အတွက် ကြည်း-ရေ ၂ တပ်ပေါင်း ၈ သိန်း နဲ့အတူ တောင်ဘက်ကိုစစ်ချီတက်လာခဲ့ကြပါတယ် အင်အားကြီးတဲ့ စစ်သည် ၈ သိန်းနဲ့ ကျုံရီ လျှိုပေ့ တို့ ဘက်မှာ စစ်သည် ၁ သိန်းနီးပါးလောက်နဲ့ ဘယ်လိုမျိုးတိုက်ခိုက်ကြလဲဆိုတာ အောက်မှာ ဒေါင်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် ဖိုင်ဆိုဒ် အကြီး 2GB Quality ... 720p ဖိုင်ဆိုဒ်အသေး 1 GB Quality ... 360p Photo & Movie Orginal Uploader Subtitle : K.M.A ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း
IMDb မှာ Rating (5.7) ရထားတဲ့ Action ,Adventure , Fantasy အမျိုးအစား The Dark Tower (2017) ကို မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ တင်ပေးထားပါတယ် ဖိုင်ဆိုဒ် အကြီးအသေးခွဲပြီးတင်ပေးထားပါတယ် Photo & Movie Credit to Original Uploader ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း
အားလပ်ရက် ရသမျှ အချိန်လေးမှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ Snowmobiling စီးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ ကောလိပ်ကျောင်းသားတစ်စုဟာ မုန်တိုင်းကြောင့် လမ်းပျောက်ပြီး နားစရာနေရာရှာဖွေရပါတော့တယ် စွန့်ပစ်ထားတဲ့ ဆေးရုံအဟောင်းကြီးတစ်ခုကို ရှာတွေ့အခါ သူတို့တွေ အရမ်းကို ပျော်နေခဲ့ကြတယ် ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီဆေးရုံမှာ သူတို့ချည်းပဲမဟုတ်ပဲ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ လူနာဟောင်းတွေပါ ရှိနေသေးတယ်လို့ သိလိုက်ကြချိန်မှာ သူတို့တွေ အသက်ရှင်သန်ဖို့ ဘယ်လိုကြိုးကြိုးစားစားတိုက်ခိုက်ရလဲဆိုတာ Wrong Turn Series တွေထဲက (၄)ကားမြောက် ဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့ Wrong Turn4Bloody Beginnings UNRATED ကို မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ တင်ပေးထားပါတယ် ဖိုင်ဆိုဒ်အကြီးအသေးခွဲပြီးတင်ပေးထားပါတယ် ဖိုင်ဆိုဒ် အကြီး 911 MB Quiality 720p ဖိုင်ဆိုဒ် အသေး 478 MB Quality 480P Photo & Movie Orginal Uploader Subtitle ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း
IMDb မှာ Rating 6.9 ရရှိထားတဲ့ Action ..Crime ..Thriller အမျိုးအစား The Equalizer2(2018) ကို မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် နောက်ရက် တွေ နံပါတ်(၁) မကြည့်ရသေးသူတွေအတွက် ပြန်တင်ပေးပါမယ် ဖိုင်ဆိုဒ် ခွဲပြီးတင်ပေးထားပါတယ် ဖိုင်ဆိုဒ် အကြီး 1.21 GB Quiality 720p ဖိုင်ဆိုဒ် အသေး 529 MB Quality 480P Photo & Movie Credit to Original Uploader Subtitle ChanNyein(MW)
မင်းသားကြီး Sylvester Stallone နဲ့ တရုပ်မင်းသား Xiaoming Huang နဲ့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Escape Plan (2) ကို မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့တင်ပေး လိုက်ပါတယ် ဖိုင်ဆိုဒ် အကြီး 875 MB Quiality 720p ဖိုင်ဆိုဒ် အသေး 300 MB Quality 480P Photo & Movie Credit to Original Uploader Subtitle ChanNyein(MW)
IMDb မှာ Rating (7.6) ရရှိထားတဲ့ Drama , Horror , Mystery အမျိုးအစာ A Quiet Place (2018) ကို မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ တင်ပေးထားပါတယ် Large Size 851 MB Quality 720p Small Size 367 MB Quality 480p Photo & Movie Credit to Original Uploader Subtitle ChanNyein(MW)
IMDb မှာ Rating (6.3) ရထားတဲ့ Action , Adventure , Drama အမျိုးအစား 47 Ronin (2013) ဇာတ်ကားကို မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ တင်ပေးထားပါတယ် ထုံးစံအတိုင်း အောက်က အစိမ်းရောင် Button က ဖိုင်ဆိုဒ်အသေးပါ Large Size 1.3 GB Quality 720p Small Size 405 MB Quality 480p Photo & Movie Credit to Original Uploader Subtitle ChanNyein(MW)
မကြည့်ရသေးတဲ့ သူတွေအတွက် Action , Adventure , Drama အမျိုးအစား 10,000 BC (2008) ကို မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ဖိုင် ဆိုဒ်ကတော့ 445 MB (Small Size) ပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ချမ်းငြိမ်-မှော်ဝန်း
Wrong Turn Series တွေထဲကမှ (၃)ကားမြောက် ဇာတ်ကား ဖြစ်တဲ့ Horror အမျိုးအစား Wrong Turn (3) Left_For_Dead_UNRATED (2009) ကို မြန်မာ စာတန်းထိုးနဲ့ ဖိုင်ဆိုဒ်အကြီးအသေးခွဲပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် Wrong Turn (1) နဲ့ Wrong Turn (2) ကိုလည်း တင်ပေးထားပြီးသားပါ မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့မို့ အညွှန်းမပေးတော့ပါဘူး File Size (Large) 1.2 GB Quality 720p File Size (Small ) 459 MB Quality 480p အစိမ်းရောင် Button နှစ်ခုမှာ အပေါ်က ဖိုင်ဆိုဒ်အကြီးပါ Photo & Movie Credit to Original Uploader Subtitle ..ChanNyein(MW) Thank ....
မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ Animation ဇာတ်ကား အဟောင်း ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ဖိုင်ဆိုဒ် က 322 MB ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
IMDb မှာ Rating..6.2 ရရှိထားတဲ့ Action , Adventure , Sci-Fi အမျိုးအစား Rampage (2018) ကို မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ ဖိုင်ဆိုဒ်အကြီးအသေးခွဲပြီး တင်ပေးထားပါတယ် ဖိုင်ဆိုဒ် အကြီး 1.3 GB Quality .. 720p ဖိုင်ဆိုဒ် အသေး 537 MB Quality ..480p အစိမ်းရောင် button နှစ်ခုမှာ အောက်က ဖိုင်ဆိုဒ်အသေး ပါ Photo & Movie Credit to Original Uploader Subtitle ..ChanNyein(MW)
IMDB မှာ Ratting 7.4 ရရှိထားတဲ့ Black Panther (2018) ကို မြန်မာစာတန်ထိုးနဲ့ တင်ပေးထားပါတယ် ဖိုင်ဆိုဒ် အကြီး 1.62 GB Quality 720p ဖိုင်ဆိုဒ် အသေး 480 MB Quality 480p အပြာရောင် Button နှစ်ခုကတော့ ဒေါင်းလို့အဆင်မပြေသေးပါ Image & Movies Credit to Orginal Uploader Subtitle ...ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း
Wrong Turn:2 (2007)
Wrong Turn Series ထဲက ဒုတိယမြောက် ဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့ Wrong Turn :2 Dead End (2007) ကို မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ဖိုင်ဆိုဒ် အကြီးအသေးခွဲတင်ပေးထားပါတယ် မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့မို့ အညွှန်းမရေးပေးတော့ပါဘူး ဖိုင်ဆိုဒ်အကြီးက 1.5 GB Quality 720p ဖိုင်ဆိုဒ်အသေး 436 MB Quality 360p Photo & Movie Credit to Orginal Uploader Subtitle ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း
The Lost Bladesman(2011)
IMDB မှာ Ratting 6.0 ရရှိထားတဲ့ Action , Biography , Drama အမျိုးအစား မင်းသား Donnie Yen ရဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပါ အရင်က ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း ကနေတင်ပေးပြီးသား ဇာတ်ကားအဟောင်းပါ မကြည့်ရသေးတဲ့ သူတွေအတွက် ဖိုင်ဆိုဒ်အသေး နဲ့ ပြန်တင်ပေးထားပါတယ် ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 444 MB ပါ Photo & Movie ...Credit to Orginal Uploader ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အရမ်းကောင်းတဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားလို့ပြောလို့ရပါတယ် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးတော့ ဂျပန်နိုင်ငံ Osaka မှာ ထောင်ကျနေတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံသားတစ်ယောက် က Yakuza တွေထဲ ရောက်ရှိပြီး သူ့ဘ၀ ကို Yakuza တွေအတွက် ပြန်ပေးဆပ်ခဲ့တဲ့ Nick Lowell အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထား တဲ့ မင်းသား Jared Leto ရဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပါ IMDB မှာ Ratting 6.3 ထိရရှိထားတဲ့ Drama, Mystery, Thriller, Crime အမျိုးအစား Outsider (2018) ကို မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ဖိုင်ဆိုဒ် အကြီးရော အသေးပါ တင်ပေးထားပါတယ် download ဆိုတဲ့ အစိမ်းရောင် button နှစ်ခုမှာ အောက်ကတစ်ခုက ဖိုင်ဆိုဒ်အသေးဖြစ်ပါတယ် အပြာရောင် ရောင်နှစ်ခုက ဒေါင်းလို့အဆင်မပြေသေးပါ File Size ..1.3 GB Quality ..1080p Small Size..400 MB Quality ..480p Photo & Movie ... Credit to Orginal Uploader Subtitle ...ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း
"IMDB" မှာ Ratting 6.1 ရရှိထားတဲ့ Horror အမျိုးအစား Wrong Turn (2003) ကို မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် "ကားနှစ်စီးနဲ့ လူ (၆)ယောက်..အနောက် ဗာဂျီးနီးယား တောထဲမှာ ဖြစ်ခဲ့အကြောင်းပါ ..ကားတစ်စီးက တခုခုကြောင့် ဘီးပေါက်ပြီး လမ်းအလယ်ကောင်မှာရပ်သွားတဲ့အချိန်မှာ ဘာသတိပေးချက် မှမရှိတော့ တစ်ခြားကားတစ်စီးက ၀င်တိုက်မိလိုက်တယ် သူတို့ ခရီးဆက်ဖို့ ခက်ခဲသွားပြီး တစ်နေရာရာကို ဆက်သွယ်ဖို့ ကြိုးစား ဖို့လုပ်တယ်..ဒါပေမယ့် မြို့နဲ့ မိုင်ပေါင်းများစွာဝေးပြီး တောအလယ်ရောက်နေတာမို့ ဘာလိုင်းမှမမိပါဘူး..နောက်တော့ သူတို့ ကားတွေကို စုံတွဲတစ်တွဲက စောင့်နေပြီး တခြားသူတွေက တစ်နေရာရာကို ဆက်သွယ်လို့ရဖို့ ကြိုးစားရှာဖွေကြပါတယ်.. အဲ့ဒီအချိန်က စပြီး တောထဲက လူသတ်ကောင်တွေက သူတို့သားကောင်တွေကို စိတ်တိုင်းကျပြုမူပါတော့တယ်.. လူသတ်ပြီး လူသားစားတဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်တာမို့ ..ကြောက်တက်တဲ့သူတွေ သွေးမြင်လို့ မရတဲ့သူတွေလုံးဝ မကြည့်သင့်ပါဘူး ကဲ အောက်မှာ Download ခဗျာ .. နောက်ရက်တွေမှာ နံပါတ် (၂) ကိုဆက်ပြီးတင်ပေးပါ့မယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း..